Quiche farmaajo degdeg ah iyo pear | Bezzia
Pear degdeg ah iyo quiche farmaajo ari ah
Maria vazquez | 04/01/2022 10:00 | La cusbooneysiiyay 30/12/2021 19:23 | Cunnooyinka fudud
Quiches waa keega macaan oo leh saldhig rooti rooti gaaban ah iyo buuxinta ukunta iyo kareemka oo lagu kariyey foornada ilaa inta la dhigayo. Cunto caan ah oo Faransiis ah oo qiraya noocyo badan oo kala duwan oo maanta aan samayno nooc aad u fudud: quiche degdeg ah oo leh pear iyo jiis ari ah
Marka qofku aanu rabin inuu adkeeyo ama uu rabo inuu awood u yeesho inuu miiska keeno cunto karinta waqti yar, kheyraad wanaagsan ayaa ah in lagu sharadeeyo ganacsiga ganacsiga. Fikradda waa in la isticmaalo cajiinka gaaban ee ganacsiga, laakiin waxaad sidoo kale isticmaali kartaa a macmacaan barar ah, in badan oo laga heli karo dukaan kasta. Haddii wakhtigu aanu muhiim ahayn oo aad rabto inaad sameyso cajiinkaada, waxaad ka heli kartaa sida loo sameeyo cuntada salmon quiche in aan isku diyaarino in aan waqti ku qabano.
Dhanka buuxinta, diyaarinta waxba kuu sheegi maayo. 10 ka daqiiqo ee macmacaanku ay tahay in hore loogu sii kariyey foornada ayaa ku filan in la diyaariyo. Oo waa waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad ku karisaa baradho microwave-ka oo aad isku qasto maaddooyinka qaarkood. Ma bilaabaynaa?
2 isteroberi oo bislaaday, diiray oo la jarjaray (1,5cmx1,5cm)
1 baradho, diiray oo la jarjaray (1,5cmx1,5cm)
80 g oo farmaajo riyo ah oo la jarjaray
1 ukun cad oo cadayashada
70 g oo kareem dareere ah
A sacab muggeed oo nuts geedka ah
Duudduub buskudka oo dhig caaryada (laga saari karo haddii aad rabto inaad ku adeegto saxan ama saxan). Si fiican u dheji saldhigga iyo derbiyada oo ka saar cajiinka dheeraadka ah. Ka dib, hoosta ku dhufo fargeeto, dhig warqad xaashi ah dusha sare iyo khudradda sare ee qallaji. Dubo at 190ºC foornada preheated ilaa 10 daqiiqo. Ka dibna ka saar warqadda iyo khudaarta oo dubi 4 daqiiqo oo kale. Marka la sameeyo, soo saar oo u daa xanaaq intaad diyaarinayso buuxinta.
Si aad u diyaariso buuxinta, ku rid xabadaha baradhada saxan, ku dabool balaastig iyo u qaad microwave-ka. Ku kari dabka oo dhan ilaa 4 daqiiqo ilaa ay jilicsan yihiin.
Dhanka kale, baaquli, isku qas ukunta oo leh kareemka dareeraha ah iyo qanjaruufo milix iyo basbaas ah.
Markaad diyaariso dhammaan qaybaha buuxinta, caday saldhigga macmacaanka leh ukun cad si aanay buuxintu u qoyan.
Kadib qaybi laadhuu baradho, farmaajo iyo pear ku jira caaryada.
Dhamaad ku shub isku dar ukunta iyo labeen, ka dibna u dhaqdhaqaaji caaryada in yar si ay si fiican u dhex gasho laadhuuga dhexdooda, ka hor inta aanad dusha sare ku rusheyn lawska geedka.
Foornada u qaad oo kari ilaa 35 daqiiqo ama ilaa inta la dhigay iyo brown dahab ah at 190ºC leh kulayl kor iyo hoos.
Soo bixi oo sug 10 daqiiqo si aad u xanaaqdo si aad u cuntid pear degdeg ah iyo quiche farmaajo riyaha ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Recipes » Cunnooyinka fudud » Pear degdeg ah iyo quiche farmaajo ari ah
Qalabka lagu hagaajiyo daboolida WiFi ee guriga
Dareenka xanaaqa ee lammaanaha